Maqaalka Zara Ziad ee Martech Zone |
Maqaallada by Zara Ziad
Talaado, Maarso 15, 2022 Talaado, Maarso 15, 2022 Zara Ziad
Tayada xogta liidata ayaa ah walaac isa soo taraya oo haysta hogaamiyayaal badan oo ganacsi maadaama ay ku fashilmeen inay gaadhaan yoolalka la hiigsanayo. Kooxda falanqeeyayaasha xogta - oo loo maleynayo inay soo saaraan xogo la isku halleyn karo - waxay ku qaataan 80% waqtigooda nadiifinta iyo diyaarinta xogta, kaliya 20% waqtiga ayaa ka haray si ay u sameeyaan falanqaynta dhabta ah. Tani waxay saameyn weyn ku leedahay wax soo saarka kooxda maadaama ay tahay inay gacanta ku ansixiyaan tayada xogta
Tiro badan oo ka mid ah suuqgeynayaasha B2B - ku dhawaad ​​27% - waxay qireen in xogta aan ku filnayn ay ku kacday 10%, ama xaaladaha qaarkood, xitaa in ka badan khasaaraha dakhliga sanadlaha ah. Tani waxay si cad u muujineysaa arrin muhiim ah oo ay wajahayaan inta badan suuqleyda maanta, waana: tayada xogta oo liidata. Xogta aan dhamaystirnayn, maqan ama tayada liidata waxay saamayn wayn ku yeelan kartaa guusha hababka suuqgeyneed. Tani waxay dhacdaa ilaa ku dhawaad ​​dhammaan hababka waaxyaha ee shirkadda - laakiin gaar ahaan iibinta
Awooda Xogta: Sida Ururada Hogaaminaya uga faa'iidaystaan ​​Xogta Sida Faa'iido Tartan leh
Talaado, Nofeembar 16, 2021 Talaado, Nofeembar 16, 2021 Zara Ziad
Xogtu waa isha hadda iyo mustaqbalka ee faa'iidada tartanka. Borja Gonzáles del Regueral - Ku-xigeenka Dean, IE University ee Sayniska Sayniska Aadanaha iyo Hogaamiyeyaasha Ganacsiga Tiknoolajiyada waxay si buuxda u fahmaan muhiimada xogta sida hantida aasaasiga ah ee kobaca ganacsigooda. In kasta oo qaar badani ay xaqiiqsadeen muhiimada ay leedahay, intooda badani wali waxay ku dhibtoonayaan inay fahmaan sida looga faa'iidaysan karo si loo helo natiijooyin ganacsi oo horumarsan, sida u beddelashada rajooyin badan oo macaamiisha ah, kor u qaadista sumcadda sumadda, ama